Smartmi Air Purifier, mpanadio tena mahay misy sivana H13 | Gadget News
Miguel Hernandez | 20/11/2021 10:00 | Gadgets, General, hevitra
Ny fanadiovana rivotra dia lasa olana maoderina fa tsy latsa-danja amin'izany, eto dia nanadihady mpanadio maro izahay izay manampy antsika hihazona ny tranontsika ho madio araka izay azo atao sy tsy misy allergen, zavatra tokony hankasitrahana amin'izao fotoana izao. Ny marika Xiaomi izay efa niaraka taminay hatry ny ela dia tsy ho hita ao amin'ny katalaogin'ny fanadihadianay.
Manadihady ny Smartmi Air Purifier vaovao izahay, mpanadio rivotra feno amin'ny endrika sy fiasa miaraka amin'ny sivana H13 izay mampanantena fahombiazana lehibe. Hojerentsika ity vokatra antonony amin’ny vidiny ity raha jerena ny isan’ireo karazana fitaovana ireo mba hahitana raha tena mendrika izany na tsia.
1 Famolavolana sy fitaovana: Fanavaozana maivana nefa miavaka
3 Fahafahana manadio
Famolavolana sy fitaovana: Fanavaozana maivana nefa miavaka
Fantatrao tsara fa efa-joro tanteraka ny vokatra Smartmi teo aloha amin'io habe sy velarana io, misy zorony boribory, eny, fa lavitry ny endrika natolotr'ity Smartmi Air Purifier ity. Na izany aza, ny palette loko nentim-paharazana dia tazonina, ohatra. Na eo aza izany rehetra izany, ny plastika fotsy matte dia tazonina ho singa fanorenana fototra, miaraka amin'ny endrika cylindrical tanteraka izay mahatonga azy ho mora kokoa ary indrindra indrindra, miasa tsara kokoa amin'ny lafiny rehetra.
Dimensions: 266 x 265 x 535 mm
lanja: 5,2 Kg
Tianao ve? Azonao atao ny mividy izany amin'ny vidiny tsara indrindra amin'ny Amazon
Tsy azo ihodivirana fa mampahatsiahy antsika ny i3000, mpanadio Philips izay saika mitovy, na amin'ny alàlan'ny famolavolana na amin'ny hoe ny tontonana LED dia hita any amin'ny faritra ambony ary io no ahafahantsika manitsy tanteraka ny mari-pamantarana ny mpanadio rivotra. Boky torolalana. Mankahala ny fampitahana, eny, fa rehefa mamakafaka ny vokatra amin'ny sehatra manokana isika dia tsy manan-tsafidy afa-tsy ny manonona ireo izay mifandray indrindra amin'izy ireo. Amin'ny ankapobeny, toy ny vokatra rehetra amin'ity marika Xiaomi ity, dia miatrika fitaovana vita tsara izay mahafinaritra ny maso sy ny fikasihana isika.
Ity Smartmi Air Purifier ity dia tsy mety amin'ny fifandraisana WiFi ary ity mamela antsika hifehy ny mpanadio amin'ny alàlan'ny fampiharana Xiaomi Mi Home azo alaina ho an'ny iOS sy Android, Ary koa ny fampifanarahana azy amin'ireo mpanampy virtoaly lehibe, mazava ho azy fa miresaka momba ny Amazon Alexa sy Google Assistant isika, fa tsy amin'i Siri na ireo avy amin'ny Apple HomeKit, na dia manana izany fampidirana izany aza ny vokatra Xiaomi hafa. Ho fanampin'izany sy ny fanaraha-maso ny manual dia manana mode «AUTO» izahay izay manao fanatsarana ny hafainganam-pandehan'ny fanadiovana araka ny sensor samihafa napetraka ao ambadiky ny Smartmi Air Purifier, ny maody izay atolotro indrindra.
Manana ventilation multilevel ihany koa izahay, satria ny maodely feo ambany dia manolotra manodidina ny 19 dB, ampy handrenesana ny mpankafy fa tsy hanakorontana mandritra ny andro. Ho an'ny alina dia manana ny «mode alina» isika izay mametra io hafainganam-pandeha io ary manatsara ny fialan-tsasatra.
Toy izany koa, hifanerasera amin'ny fitaovana azontsika araraotina na ny ecran touche azy, na rafitra fihetsehana amin'ny alàlan'ny sensor akaiky izay ahafahantsika manatanteraka ny fanitsiana lehibe tsy mila hikasika ny tontonana mikasika ny faritra ambony. Tsy dia tsara loatra ny fifandraisantsika amin'ny rafitra gesture, lazaiko fa aleoko ny fanitsiana amin'ny alàlan'ny fampiharana na mivantana amin'ny fikasihana ny efijery.
Eto ny Smartmi Air Purifier no manao ny ambiny. Hanombohana, manana sivana HEPA H13 isika izay afaka mitroka fofona ratsy, setroka, poti-TVOC (mahazatra amin'ny vokatra fanadiovana) ary mazava ho azy ny vovobony. Ao amin'ny tontonana dia afaka mahita fampahalalana momba ny PM2.5 izay ananantsika eny amin'ny rivotra sy ny famantarana ny sata TVOC isika, ho fanampin'ny famantarana iray hafa ny fomba fiasa, ny mari-pana ary mazava ho azy ny mari-pamantarana hamandoana izay eo amin'ny toerana misy ny mpanadio rivotra.
Ao anatin'ireo teny ireo ary manararaotra ny sensor roa "intelligent" azy, dia hitantsika fa amin'ny fampiasana fanadiovana rivotra roa ambin'ny folo eo ho eo isan'ora, ity fitaovana ity dia afaka manadio manodidina ny 15 metatra toradroa ao anatin'ny dimy minitra, ka ity iray ity indrindra no atolotra ho an'ny avo roa heny. efitra na efitra fandraisam-bahiny kely, na inona na inona ho an'ny efitrano feno na lalantsara lehibe kokoa. Na izany aza, ny sivana karbônina mavitrika dia mampiasa mekanika telo:
Sivana voalohany ho an'ny vovoka, volo ary poti be
Ny HEPA marina dia sivana H13 izay manivana ny 99,97% amin'ny poti-javatra manala na bakteria sy mikraoba aza.
Saribao mavitrika mifoka formaldehyde, setroka ary fofona ratsy miaraka amin'ny VOC.
Amin'ny fahombiazany dia miresaka momba ny 400 m3 isan'ora isika ho an'ny vovobony ary mitovy amin'izany koa ho an'ny singa CADR, raha toa ka manana tavy sivana mirefy 20.000 cm3 isika. Amin'izao fomba izao, hanivana ny 99,97% amin'ireo potikely kely noho ny 0,3 nanometer izy io, ary koa ireo singa sisa noresahintsika teo aloha.
Na dia eo aza ny sata ofisialin'ny vokatra dia tsy afaka nahita ny sivana manokana aho, izay tsy voafaritra ihany koa ny faharetany ary izany dia ho tantanin'ny fampiharana Mi Home na amin'ny fitaovana fampitandremana manokana an'ny efijery, mahamenatra. Heveriko fa hisy mpaninjara bebe kokoa amin'ny sivana ho tonga, amin'izao fotoana izao tsy azoko lazaina na ny vidiny na ny varotra izay ahafahanao mividy azy ireo, raha ny fahitako azy dia misy zavatra manapa-kevitra rehefa mividy vokatra misy ireo toetra ireo, na firy na firy ny sivana manana faharetana avo.
Miatrika mpanadio izay ara-teknika sy an-taratasy isika dia manome toetra tena tsara, tsara kokoa raha azo atao noho ireo mpifaninana aminy amin'ny vidiny mitovy ary ambony lavitra aza. Manana 259 euros izahay mpanadio tena feno izay manana ny toetra rehetra andrasana amin'ny vokatra toy izany. Indrisy anefa fa tsy afaka miala amin'ny teboka ratsy aho fa tsy mahita kojakoja azo alaina amin'ny toeram-pivarotana toy ny PC Components na Amazon, izay reference any Espaina, ankoatra ny hoe mety ho hita amin'ny tranokala toa an'i AliExpress.
Navoaka tamin'ny: Novambra 20 avy amin'ny 2021
Fanovana farany: Novambra 13 avy amin'ny 2021
Fifandraisana sy endri-javatra
Tsy nahita kojakoja mora aho
Tsy misy amin'ny tranokala lehibe amin'izao fotoana izao
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » hevitra » Smartmi Air Purifier, mpanadio tena mahay ary misy sivana H13
Lenovo IdeaPad Flex 5 Convertible Laptop misy fihenam-bidy € 100,99